I-Semalt Isexwayisa Ngeentlobo ezahlukeneyo zeWebhu ye-WordPress kwi-Hacks
Ukuba ukhuseleko lwakho lubuya luhle, iwebhusayithi yakho inokubethwa ngabagaxekile. Sonke siyazi ukuba i-WordPress yinkqubo edumileyo kunye neyona ndlela iphambili yokulawula umxholo. Ngenxa yenani elikhulu kunye nevolumu yeSayithi yePlopress kwi-intanethi, akunakwenzeka ukuba sihlale sikhuselekile kwi-hack WordPress.
URyan Johnson, ingcali ephezulu Semalt , unika apha uluhlu lweenkcukacha ezahlukeneyo zewebsite yeWebPress kwi-intanethi ukuze uhlale ukhuselekile.
I-Malware ihlanganisa zonke iintlobo zeenkqubo eziyingozi kunye nezingozi kunye ne-software, ezifana ne-virus, iTrojans, i-ransomware kunye ne-spyware - modal stoff atmungsaktiv. Uza kubona i-akhawunti yakho ye-Google Analytics; i-malware nayo i-pop-ups kwisiphequluli sewebhu isilumkisa ukuba siyigqibe ngokukhawuleza. Kufuneka ufake i-antivirus okanye inkqubo yokulwa ne-malware ukuze uyisuse. I-Malware inokwenza zonke iindidi zezinto ezinokuzithemba ezifana nokweba iinkcukacha zekhadi lakho lesikweletu, ulwazi lomntu siqu, ukulimaza isayithi lakho, ukususa iifayile ezibalulekileyo nokuvala ikhompyutha yakho okanye isistim somnxeba uze uhlawule intlawulelo.
Ukuhlaselwa kwe-phishing kwenzeka kakhulu nge-imeyile ekukhangela ukuba uvule ezinye izinamathiselo okanye ungene kwiiwebhusayithi ezimbalwa ezifana ne-PayPal, ibhanki yaseMelika kunye nabanye. Bakufuna ukuba ucofa kwiibhanki ezikhunjulwayo kwaye ukhangeleke. Ngokuqhelekileyo, ukuhlaselwa kobuqhetseba kuhloswe kukukukhohlisa, kwaye abahlaseli basebenzisa loo ma-imeyile ukuze batshale iinkcukacha zakho kwi-intanethi. Akufanele unqakraze nayiphi na ifakile ye-imeyile ekhangelekisayo okanye engaqhelekanga.
I-SQL yimiyalezo yekhompyutyana esebenzisa ii-blogs ze-WordPress kunye newebhsayithi. I-SQL (uLwimi oluQulunqiweyo loLwimi) lunceda ukunxibelelana neenkcukacha. Ngokucacileyo, i-injection ye-SQL ingathatha indawo ye-SQL imibuzo kunye neenkcukacha ezikhokelela kwiziko ledatha ukwenza into efana nokukhwabanisa kunye ne-phishing. Abahlaseli basebenzisa olu lwazi ukuba idatha yakho nokudlulisa iifayile zakho kwiikhompyutheni kwenye. Iiplagizi ze-Wordpress kunye nezihloko ezahlukeneyo zinokukunceda ukukhusela ii-injection ze-SQL.
Ngeengxelo ezahlukeneyo ze-imeyile kwi-intanethi, abantu basebenzisa iphasiwedi efanayo kwiziko ezahlukeneyo. Ukuba abahlaseli bafumana enye yeephasiwedi zakho, banako ukufikelela kwii-akhawunti zakho ezininzi ngokulula. Yingakho kufuneka uthintele amaphasiwedi akho ukuba ahlaselwe kwaye agcine amaphasiwedi ahlukeneyo kwiakhawunti ezahlukeneyo.
Ukuhlaziywa kwesofthiwe esilahlekanga
Iingcali ze-WordPress zikhuthele ngokuphucula iiplagi, isofthiwe kunye neempendulo. Abasebenzisi be-Wordpress abazikhangeli ngokufaka nokuhlaziya iinkqubo zabo. Ngaloo ndlela, ukulahleka ukuhlaziywa kwesofthiwe kungakhokelela ekuhluphekeni kwi-intanethi. Kukhuselekile ukuthetha ukuba le nto ingeyona ingxaki enkulu kwi-intanethi kwaye ungalahlekelwa iifayile ezixabisekileyo kunye nedatha ngenxa yokuhlaziywa kweekhompyutha.
Iindatshana ezikhuselekile kunye neeplagi
Njengabantu abahlukileyo bafaka iikhowudi kwi-WordPress kwiifom kunye neefowuni, abahlaseli banokusabalalisa i-malware kunye neentsholongwane kuzo lula. Ukhuseleko olufanelekileyo kukuba kugcinwe iiplagi kunye nezihloko.
Imigaqo-nkqubo engakhuselekanga yokukhusela inokukwenza uzive uhlungu, kwaye ishishini lakho liyeke ukukhula. Ukuba abantu abaninzi baye bafikelela kwiwebhusayithi yakho, akufuneki ukuba wenze i-Admin. Kunoko, unako ukubanika indima eyahlukileyo kwaye ubathintele ekufikeleleni kwiPaneli ye-Admin yeSayithi yeWindowsPress.
Ukuhlaselwa kweNdawo yokuThunywa kweNkonzo yoLuntu kuqhutywe kwaye kuqaliswe lula kwi-inthanethi. Bakwazi ukuhlawulela lula iindawo ezininzi ngaphandle kokwazi i-webmasters.